Tratran’ny vela-pandrika : miaramila afaka roa lahy tratra nivaro-basy sy bala | NewsMada
Tratran’ny vela-pandrika : miaramila afaka roa lahy tratra nivaro-basy sy bala
Tsy afa-bela tamin’ny zandary ireo mpivarotra basy teto an-drenivohitra. Nisy miaramila afaka tamin’ireo…
Voasambotry ny zandary ny lehilahy telo nikasa hivarotra basy poleta 7.65 mm niaraka tamin’ny bala dimy sy “boite chargeur” iray, ny alatsinainy maraina lasa teo. Voasambotra teny Anosy ny iray tamin’ireo, teny Ankadilalana ny faharoa, ary tany Tanjombato ny fahatelo. Voalaza fa miaramila misotro ronono ny iray ary miaramila afaka ilay namany. Araka ny fanazavana ihany, nahazo vaovao ny zandary ary nanao vela-pandrika nisamborana azy ireo ka tratra teo Anosy ny lehilahy iray voalohany izay 33 taona. Afaka nitsoaka kosa ilay lehilahy faharoa izay 34 taona ka nifanenjehana ary teny Ankadilalana teo akaikin’ny college de France vao tratra.
3 tapitrisa ariary no saika hivarotan’izy ireo ilay basy sy bala. Rehefa natao ny fanadihadiana, nanonona olona iray hafa izy ireo izay nolazainy fa loharano nipoiran’ilay basy ka nosamborina tany Saropody Tanjombato ity farany. Natolotra ny fampanoavana omaly izy telo lahy ireo.
Miaramila teo aloha nanafika tany Port Berger
Nisehoana fanafihana nataona miaramila teo aloha koa tany Port Berger. Araka ny vaovao azo, dimy lahy ireo nanafika ary nirongo Kalachnikov izy ireo tamin’izany. Fantatra fa miaramila teo aloha izy ireo, ary mbola miandry fiantsoana indray. Voasambotry ny zandary sy ny fokonolona izy ireo nandritra ny fanafihana nataony.
Samy mametra-panontaniana ny rehetra ny amin’ireto olona avy nanao asa miaramila, lasa manao asan-jiolahy ireto. Avy amin’ny mpitandro filaminana ihany ny jiolahy izany. Tsy mahagaga raha mahay mampiasa basy avokoa ny olon-dratsy. Eo ihany koa ny fiparitahan’ny basy manerana ny faritra. Avy aiza ihany?
Yves S. /Sary: Fano